Ziyini Izinzuzo Zomsindo Wokuqhuma Nama-alamu Wokukhanya?
Uhla lwesicelo sama-alamu omsindo wokukhanya nokuqhuma luya ngokuya lubanzi futhi lubanzi. Yini ebangela lesi simo? Ake sibheke. Kulezi zinsuku, imvelo yamakhemikhali iya ngokuya iba yinkimbinkimbi futhi iyashintsha, nezinga lokuhlola nobubanzi bokusetshenziswa kwe-exp ...
Ibhokisi Lokusabalalisa Lensimbi Engagqwali
Amabhokisi okusabalalisa ibhokisi elingenalutho le-Stainless Steel Explosion box manje asetshenziswa kabanzi, futhi wonke umuntu uvamise ukuthenga amabhokisi afanayo, kepha empeleni, kungcono ukwenza ngokwezifiso amabhokisi ngokwesimo sakho. Ezindaweni eziningi, ukusetshenziswa kwensimbi engagqwali i-distri-proof distri ...
Ungayikhetha Kanjani Futhi Uyifake Amalambu aqinisekisa ukuqhuma?
Ungayikhetha Kanjani Futhi Uyifake Amalambu aqinisekisa ukuqhuma? Amalambu okuqhuma ukuqhuma abhekisa ezindaweni eziyingozi njengezindawo ezivutha umlilo nezezintuli. Kungavimbela amanye amagesi avuthayo nothuli olubangelwa ama-arcs, izinhlansi namazinga okushisa aphezulu angenzeka ngaphakathi kwesibani, ukuze ahlangabezane nezimfuneko o ...
Uchungechunge lwe-Taiyi Explosion-proof Series-TYMLED601 Lighting-proof Lighting
I-Taiyi Explosion-proof Series-TYMLED601 Lighting Explosion-proof Izici ezintathu zemikhiqizo yokuqhuma kweTaiyi Energy: 1. Ukuphepha 2. Ukonga amandla nokuvikelwa kwemvelo 3. Ukusebenza okubanzi 1. Igobolondo lenziwe nge-aluminium alloy spray kanye ne-die-casting, nomenzi ...
Ingasetshenziswa Kuphi Izibani Eziqinisekisa Ukuqhuma?
Namuhla ngizokhuluma nawe ngezindawo lapho kufanele kusetshenziswe khona amalambu okuqhuma. Wake wazibona izindaba zangempela? Isibonelo, kwaqhuma isitshalo samakhemikhali, kwafa abahlanu kwathi olimale oyedwa walimala, njll. Eqinisweni, lolu hlobo lwamacala afanayo lungagwemeka ezimweni eziningi. Imvamisa kubalulekile ukufaka ukuqhuma ...
Ungazisebenzisa Kanjani Izixhumi Zokuqhuma
Ekhuluma "ngezixhumi eziqinisekisa ukuqhuma", wonke umuntu embonini ujwayelene nayo. Kunabakhiqizi abaningi, njengoChengdu Taiyi. Kukhona namagama amaningana, njengezixhumi, ama-plugs, njalonjalo. Noma ungangibuza ukuthi kungani ungibiza ngaleyo ndlela, ungasho nje ukuthi omas ...
Incomo Yomkhiqizo Omusha – Isibani Esiphezulu se-LED Explosion-proof
Incomo Yomkhiqizo Omusha – Isibani se-LED Bay High-proof Kulolu shicilelo, ngifuna ukwethula kuwe umkhiqizo wethu omusha: I-LED light-proof high bay light. Lolu chungechunge lwemikhiqizo lungasetshenziswa nasezindaweni ezahlukahlukene eziyingozi. Uma kuqhathaniswa namalambu ezikhukhula aqinisekisa ukuqhuma, i-LED explosio ...
I-Taiyi Ex-proof Series-TY / PLED502 Ex-proof Platform Light.
Izici zemikhiqizo yokuhlola ukuqhuma kweTaiyi: 1. Ukuphepha, ukonga amandla, ukuvikelwa kwemvelo nokusetshenziswa okubanzi. 2. Igobolondo lenziwe nge-high-resistant aluminium alloy ngokuphonswa kokufa okukodwa. Ubuso buhlanzwa ngejubane lokuqhuma kwesibhamu kanye ne-high-voltage spray electrostatic ...
Imizuzu nje engu-3! Uzofunda ukuthi ungazibona kanjani izinzuzo nezingozi zezibani ze-LED zokuqhuma.
Lapho bebhekene nazo zonke izinhlobo zemikhiqizo namanani aphezulu noma aphansi, abathengi abaningi kungenzeka abazi ukuthi bathenge kanjani futhi bahlukanise phakathi kokuhle nokubi. Lapha, ngifingqe amaphuzu amane wabathengi ukubasiza ukuthi baqiniseke ukuthi bayathenga. 1. Ukupakisha ...
Ungahlukanisa kanjani ukukhanya okukhombisa ukuqhuma, ukukhanya okukhombisa ukuqhuma kwe-LED kanye nezibani ezijwayelekile ze-LED?
Ngikholwa ukuthi lapho umthengisi exhumana namakhasimende asembonini ekwazi ukuqhuma uzohlala ehlangana nemibuzo efana nokuthi "Yini ukukhanya okukhombisa ukuqhuma? Yini ukukhanya okukhombisa ukuqhuma kwe-LED? Noma Uyini umehluko phakathi kokukhanya okuqhuma okuqhuma nokujwayelekile L ...